Mabhachi / Vest → Kushambadzira mbatya • nyanzvi P & M machira emakomputa
Kushambadzira majaketi nemavesti zvirokwazvo sarudzo yakanaka yemwaka wekudonha uye mwaka wechando. Hembe dzatinopa dzinotaridzika zvakanaka kwazvo, asi zvakare dzine zvinoshanda zvinhu zvekushandisa. Inoshanda pakudzivirirwa kubva kuzvinhu zvekunze zvakaita semhepo nemvura.
Mabhachi asinganaye mvura uye asina mhepo uye mavesti
Kucheka kunofanirwa kutariswa kwakawanda kusanaya kwemvura uye isapinda mhepo, nekuda kwekushandisa kwavo mune yakaoma kunze mamiriro ekunze. Kugadzirwa mabhachi nema vesti echinyakare matekinoroji anoshandiswa kuitira kuti chigadzirwa chishande kwemakore mazhinji mune yakanakira mamiriro ichichengetedza ayo zvivakwa.
Mhando dzakasiyana dzemaitiro ekunyaradza uye chengetedzo
Mauri shopu muchawana majaketi uye kamizelki mune akasiyana masitaera evakadzi, varume, vana uye unisex. Hwakasiyana-siyana saizi uye mavara anotendera iwe kuti ugadzirise zvigadzirwa kune zvaunoda uye uzvizive maererano nemavara ane mavara ekambani kana kirabhu.
Iyi ndiyo sarudzo inonyanya kukosha kana uchihodha kushambadza zvipfekokunyanya kana tikamusarudza kuita munhu nekuuraya munhu anodhinda.
Ivo vanoumba rakakosha boka zvipfeko zvinoratidza, kuvandudza kuchengetedzwa mumunda uye munzira. Ivo vakakwana pakufamba mushure merima, pamwe nemamwe mazuva ane makore.
Chipo ichi zvakare chinosanganisira yero, inoratidzira vesti yevana, iyo inonyatso kuvandudza kuoneka uye kuchengeteka kwemwana mumugwagwa kana munzira yemugwagwa munzira iri pakati pekumba nechikoro. Zvipfeko zvekuratidzira zvevakuru pamwe nevana zvinobatsira kudzikisa njodzi yenjodzi yakakomba nekuda kwekuvandudzika kwekuonekwa.
Isu tinopawo bhachi rinoratidza nemukana wekuvhara maoko nemaoko, ayo anonyanya kubatsira munguva dzekuchinja uye chero papi pacho panoda shanduko mune zvakatipoteredza uye tembiricha. Iyo jekete ine bvisika remukati jekete rebvudzi, yakasimbiswa 3M inoratidzira mitsetse, inosangana neE ISO zviyero. Chigadzirwa chacho chinogona kuve chemunhu, asi nekuda kweakawanda seams uye muhomwe, nzvimbo yekumakisa ishoma, kuwanikwa kwekumaka kuri kumashure.
Zvishongo (kombiyuta yemakomputa kana kudhinda screen) pamajaketi nema vesti anogadzirwa nekutarisisa kune zvese zvese.
Kutarisisa kwemhando yepamusoro zvinoreva kuti zvipfeko zvaunotenga zvichave nyanzvi inomiririra kambani. Yedu kambani ine yayo yega muchina paki, iyo inotibvumidza kunyatso kudzora maitiro ekushongedza padanho rega rega, uye nekudaro kuti tiite nekukasira muchiitiko chekukanganisa kwekugadzira.
Sezvo chigadzirwa chinowedzerwa uye zvinodiwa nevatengi, takaita sarudzo yekushongedza tichishandisa nzira dzakasiyana siyana, kutanga kwezvose kombasi yemakomputaasi zvakare kudhinda screen, sublimation i kupisa kupisa.
Tinokukoka iwe kukurumidza uye kwemahara kukosha.
kudziya mabhachi ebasavakadzi vesti vestimajasi ebasa evarumezvipfeko zvebasa zvevarumeinsulated basa zvipfekozvipfeko zvebasa zvevarumekuratidza mavheti ebasazvipfeko zvebasabasa zvipfeko Allegrozvipfeko zvebasa rezhizhainsulated basa zvipfekokuratidza mavheti ebasaOLX basa zvipfekobasa zvipfeko zvine chinyorwachando chebasa zvipfekomajasi ebasa evarumevarume echando anoshanda majaketiyakadzivirirwa mabhachi ebasainojekesa majaketi ebasainojekesa majaketi ebasa Allegromabhachi emvura evarumeshanda majasi anonayamabhachi ebasaAllegro anoshanda jaketimachena mabhachi ebasamabhachi ebasa evakadziplus kukura kwejaketi dzebasamajasi ebasa evarumechando basa jakitiasiri-anotsva majaketi ebasayakadzivirirwa mabhachi ebasainojekesa majaketi ebasaInojekesa majeketi ebasa rechandomabhachi ebasa olxmvura isinganaye majaketithermoactive basa majaketichitubu chebasa mabhachimabhachi ekushanda ane chinyorwamabhachi ekushanda ane ma reflectoryechando majaketi ebasaAllegro yechando yebasa mabhachijekete revakadzi rechando rebasaInojekesa majeketi ebasa rechandoinojekesa nguva yechando yebasa mabhachi Allegrokunaya kwemvura nguva yechando majaketiyechando yebasa mabhachi shopumabhachi echando evarumeInoratidza basa majaketi echandoshanda majaketi echandojeketi dzinotaridza nguva yechandoakasununguka mabhachi ebasavakapiwa mabhachi ebasamascot mashandiro emabhachinorway anoshanda majaketiinojekesa majaketi ebasazvipfeko zvebasayakadzivirirwa mabhachi ebasashanda majaketi echandoshanda zvipfeko zvehembeyechando majaketi ebasa
5 / 5 ( 13 mavhoti )